War-saxaafadeed: Nuxurka 13 qodob oo ka soo baxay Kulanka Wadda Tashiga Wasiirada Somaliland | Warsugan News
Home Wararka War-saxaafadeed: Nuxurka 13 qodob oo ka soo baxay Kulanka Wadda Tashiga Wasiirada...
War-saxaafadeed: Nuxurka 13 qodob oo ka soo baxay Kulanka Wadda Tashiga Wasiirada Somaliland
Waxaa shalay oo taariikhdu ahayd 26-ka Diisembar, 2017 la soo gabagabeeyey kulankii wada-tashiga Golaha wasiirada uga socday Hotel Royal Palace ee Hargeysa.
1.	In xubnaha golaha wasiiradu ay si wada jira u shaqeeyaan, iskana kaashadaan hawlaha qaranka ee horyaalla.
2.	In qorshaha xukuumadda lagu saleeyo barnaamijka xisbiga Kulmiye iyo qorshaha horumarinta qaranka ee labaad (NDPII).
3.	In la xoojiyo siyaasadda arrimaha dibadda, lana kordhiyo dadaalka loogu jiro ictiraaf raadinta.
4.	In la xoojiyo amniga gudaha, si buuxdana loo sugo xuduudaha dalka.
5.	In la dhiiri-galiyo lana fududeeyo maal-gashiga, si loo abuuro fursado shaqo.
6.	In la kordhiyo dakhliga , dib u habaynna lagu sameeyo Maamulka Maaliyadda.
7.	In la sameeyo guddi farsamo oo ka soo talo bixisa xal u helidda Sicir-bararka.
8.	in kor loo qaado wax-soosaarka dalka, bulshadana lagu dhiiri galiyo inay tabcadaan.
9.	In kor loo qaado adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada Somaliland loo fidinayo.
10.	In dhidibada loo aaso nidaamka maamul-wanaaga, laguna dhaqmo daah furnaan iyo caddaalad.
11.	In la dajiyo qorshe qaran oo ku wajahan ka hortaga iyo wax ka qabashada abaaraha.
12.	In dadaal dheeraada lagu bixiyo sidii loo tayayn lahaa shaqaalaha dawladda.
13.	In hindisaha wax-qabadka madaxweynaha ee boqol iyo labaatanka cisho(120) ee u horeeya xukuumadda la fuliyo, wasaarad walbana ay qaybta kaga soo hagaagaysa fuliso.
Previous articleOGEYSIIS: ‘Gelbiskii Geerida’ Qallinki: Cabdiqaadir Dayib Askar
Next articleDaawo Madaxweynaha Somaliland oo soo Xidhay Kulanka wada tashiga golaha wasiirada JSL, Baaqna u diray Beelaha ku Dagaalamada Koonfurta Sool, sidoo kalena tacsiyadeeyey dadkii wax ku noqday Dab waxyeelo geystay oo ka dhacay Gabiley iyo Wajaale, Boggaadiyeyna Booliska iyo Dab-damiska Boorama iyo Hargeysa